Ogow waddanka duufaannada ugu badani ka dhacaan | Saadaasha Shabakadda
Xilliga duufaanta waxay bilaaban doontaa dhowr bilood gudahood, waxaana jira dalal durbaba isku diyaarinaya inay wajahaan cawaaqib xumada ay la imaan karaan sida ugu macquulsan. Mid ka mid ah ayaa ah Mareykanka, waddanka adduunka oo ay duufaanno badani ka dhacaan sanadkiiba.
Ma rabtaa inaad ogaato sababta?
Khariidad sanadeedka duufaannada u dhexeeya 1950 iyo 1995 kana socda Maamulka Badweynta Qaranka iyo Cimilada (NOAA)
Waxay soo baxday in aagga afafku ku habboon yahay dhacdooyinkan inay dhacaan. Waqooyiga waxaan leenahay hawo qabow oo ka timaadda Kanada waxayna la kulmeysaa cimilada diiran ee ka socota Gacanka Mexico. Inta udhaxeysa labada meelood ee Bannaanka Weyn waa mid fidsan, oo ah wax doorbida duufaanno inay dhacaan.
Dhibaatada ugu weyn ee Mareykanku wajahayo waa tan: in kastoo guryaha badankood ay leeyihiin meel ammaan ah oo ay ku badbaadaan naftooda, ku dhowaad dhammaan tornaadooyinka waxay dhacaan habeenkii, markayba hurdaan, wax ka dhigaya mid maadi iyo dhaawac jirka mid muhiim ah, maadaama ay ka tagi karaan in ka badan labaatan qof oo dhintay.
Tornado ee texas
Waxay badanaa dhacaan guga iyo deyrta, iyo had iyo jeer isla goboladaas, oo ay ku jiraan: Oklahoma, Nebraska ama Kansas. Xaqiiqdii, aaggan waxaa loo yaqaanaa orod duufaan, iyada oo ay ugu wacan tahay xaddiga iyaga ka soo baxa sannad kasta meelahaas. Markay dhammaato, waa Adeegga Cimilada Qaranka (NWS) ayaa mas'uul ka ah qiimeyntiisa. Tani waa wax sameeya go'aaminta xawaaraha dabaysha iyo darnaanta waxyeellada, kaas oo loo yaqaan Fujita Enhanced ama EF. Sidaas darteed, waxaan lahaan lahayn EF0 haddii ay kaliya waxyeello yar geysatay, ama EF5 markay waxyeello u geysatay magaalooyin ama magaalooyin dhan.
Waxaan rajeyneynaa isbedelka cimilada iyo heerkulka sii kordhaya duufaanno badan oo dhaca ayaa dhaca, iyo xoog badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Waddankee ayay duufaannada badanaa ka dhacaan? Soo ogow!
Waxaan ka faallooday borofisar ku takhasusay sheybaarka cilmiga fiisigga ee Iutval, anigoo midabeynaya hawo qaadashada tixraacna ku noqonaya dhoolatusyada militariga ee duuliyayaashu ku duulayaan iyo midabku ay u dhigayaan calan, su'aashu waxay tahay walax kasta waxay leedahay falgal, u qaadashada qoyaan tixraac ahaan. Wax baan kaaga tegayaa, inta hartay waad qabanaysaa, waxaan arkay laba nin oo ku dhex jira goob lagu iibiyo oo ku taal la isabelica, midna shaadh cadcad leh, waxay hadh ii dhigtay aniga waxay ila tahay inuu hub haysto, ka dib ayaan haddana arkay oo wuxuu u ekaa mid ka mid ah taallkii uu ku waday baabuur. Booliska, waan baqay waxaanan u sheegay walaalkay, halkan waxaa ku nool dad deris ah oo waxa ay sameynayaan ay cabsi gelinayaan, qaar si xun ayey iila dhaqmeen qaarna dhibaato ayey ii raadinayaan.
Jawaab yoamil leandro ortega
Lama degaanka ay ku hanjabtay cimilada sii kululaaneysa